Zombie lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
isika, dia tsy matahotra ny lalao Zombies aterineto, fa raha tsy nisy sarimihetsika momba ny mandeha biby goavam-be, ny olona aorian'ny fivoriana ao amin'ny sarimihetsika natahotra ny handeha irery. Nahatsapa izy ireo fa ny tale Fantasy ho velona indray. Amin'izao fotoana izao isika dia afaka hilalao ho maimaim-poana, mandrava zombies amin'ny isan-toko, fanafody afo, fitifirana basy na mitoraka legioma. Ireo biby goavam-be mampidi-doza aza, fa mikaviavia ka handringana azy mora foana. Na izany aza, dia ankehitriny koa afaka mamitaka sy ny hianatra, ary indraindray satria ny zavatra tsy maintsy nanatona ny famoronana.
Subject efa imbetsaka nikapoka zombies. Toa zava-baovao avy aminy dia tsy miandry, fa ny mpanoratra maneho ny vokatry ny saina, ary manolotra antsika maimaim-poana amin'ny aterineto vaovao hilalao lalao Zombie. Velona indray ny biby goavam-be mbola noana. Tsy mahatsiaro fahoriana sy sarotra izy ireo hamono, satria efa maty izy ireo. Fa raha nanapaka ny lohany, dia hanana fahafahana ho velona. Izay ihany rehefa Voahodidin'ny vahoaka ny biby goavam-be, ny tananao amin'ny antsibe dia tsy nahajanona asa mafy. Avy eo dia misy dikany hanararaotra fitaovam-piadiana hafa, toy ny gorohostrelom.
Tafika ny miaramila Worlds Ady
Army ny miaramila: Fanoherana
Mandratra amin'ny satroka
Famonjena ny Zombies
Osy vs Zombies
Zana-kazo Tycoon Factory
Pixel Apocalypse: Manomboka ny fanafody
Maty Tany Adventure
Lalao Zombies tamin'ny Category:
Farany Zombie lalao
Mihazakazaha Zombie, Mihazakazaha
Lalao Online Rehetra Zombie lalao
Toa Zombie efa fantatsika ny zavatra rehetra isika, fa mbola ny tena mpandray anjara ny horohoro sarimihetsika, boky feno sary sy Zombie lalao. Izay rehetra te-ho maty mandeha olona mahalala fa ho lavo eo ambanin'ny Meteor orana; mikasika ny zavatra mamoaka taratra; manimbolo ny vovoka, izay nanidina avy lavitra planeta na ho amin'ny ivon'ny ny taorian'ilay loza ny laboratoara. Maty dia mora, zava-dehibe, ary avy eo dia miverina amin'ny fiainana. Fa izany dia tsy afaka matahotra - mpahay siansa kevitra hoe ahoana no mamoha anareo avy ao am-pasana. Toa fa ny zavatra niainana no ampiasaina raha tsy manana ny mamorona toy ny maro nandeha maty, ary tsy maintsy miaiky, amin'ity tranga ity dia nahomby.
Ahoana no ho Zombie? - Play-tserasera lalao!
Zombie Shooting lalao ho tonga ny fandefasana pad ho ny fanombohan'ny Nafotaka ny ady izay teo ny olona mbola velona, ​​ary efa maty velona. Tokony hifikitra ny Zombie ny nofo, ary afaka mahazo antoka fa tsy ho ela mahatanteraka miaramila azy - faty tokoa no mikotrika. Na izany aza, na dia teo aza ny tsy fifanarahan'ny ny fisiany, ny zombies mety ho faty izy.
Ny fomba famonoana zombies
Alefao! Afaka aoka feno Clip ny bala tena izy, nefa izy ireo kely fotsiny ny mijery, toy ny hoe eo amin'ny dihy, ary manohy ny mihaza. Ary raha misy tsy manan-tsabatra, voatifitra teo amin'ny lohany raha mbola tsy nipoaka. Na izany aza, nanapaka ny lohany, dia afaka hampitony ny mpikomy rehetra fanahy.
isika hiomana pitipoà! Zava-mahagaga lalao "Zombies vs. Plant" manolotra multi-anivon'ny paikady amin'ny singa ny toe-karena izay misy ny fitaovam-piadiana an'i Ochumelov maty zava-maniry. Tsirairay amin'izy ireo manana ny hery manaitra sy avy amin'ny sehatra mba anivon'ny aterineto ny lalao Zombies dia hanana fahafahana miditra amin'ny voankazo sy legioma isan-karazany.
ianao tany izy tamin'izany bozaka maitso anananao kolontsaina sy maneho ny fananiham-bohitra ny intrusive vatana, izay, kosa, koa mutate ny fotoana rehetra sy hampitombo hery ny fanafihana.
Cafe ho an'ny maty
momba izany, namorona storylines maro, ary ny sasany tsy Tally miaraka amin'ny fanehoana ny azy, toy ny fisotroana kafe ho Zombie. Amin'ny rariny, dia miaiky fa tena mahasoa hevitra.
Etsy an-danin'izany, dia manao karazana Nahasarika ary ankehitriny, raha very ny lonaka, dia tonga indray ny fanokafana ny fihazana. Izany dia midika fa tokony hanao izay rehetra azo atao mba hiasa manodidina ny famantaranandro trano fisakafoanana, ary ny sakafo efa intsony.
ao an-dakozia, ny sakafo rehetra no miandry culinary famoronana. Izay mametraka ny olona matetika ny fanosotra raozy, ianao niisa:
Ary ny elatry ny ramanavy,
ny fampisehoana Tsy mety amin'ny gourmets, ka an-dakozia ihany no tena nahazo ny Zombie mpankafy ny lalao an-tserasera.
Live Biby Goavam nilaza ho fanohizana mavitrika amin'ny fiainana ara-tsosialy, ka aza gaga ny hahita azy ireo tao amin'ny kianja filalaovam-baolina, nihazakazaka nanaraka ny baolina ka mitsangàna eo am-bavahady. Mihitsy aza izy ireo manana mpanohana vondrona miaraka amin'ny tanora tovovavy zombies mitsambikina amin'ny zipo fohy sy manofahofa pompoms. Izy ireo ihany koa ny mandray anjara amin'ny foko, sy ny filalaovana baolina Skateboarding.
Ankoatra izany, tselatra lalao momba ny zombies manolotra:
Play ny mahita sary toy izany koa,
colorize ny sary;
mba hiasa azy sy hankalaza ny Taom-baovao.
Ny zombies avy!
Ao amin'ny virtoaly zava-misy ny olona afaka hivadika ho amin'ny Zombie noho ny antony maro. Ohatra, noho ny fandotoana ny ny vokatra, izay ahitana ny fototarazo farany sakafo - izany ketchup, vatomamy, Cola, hena sy sakafo hafa. Olona miezaka io "sakafo" ho very saina biby goavam-be mivezivezy eny an-dalambe sy ny hanafika izay rehetra mivory ao. Ny niharam-boina ny zombies ho toy ny biby goavam-be - toy ny aretina nanitatra eo amin'izao tontolo izao, handringana ny firenena iray manontolo. Herim-po ihany ny tena mahery fo dia afaka manatona ny biby. Dia handray fiadiana sy tonga misaintsaina ny zombies amin'ny nanapaka azy amin'ny sabatra sy ny sabatra, na handringana ny vatany basy.
Koa be herim-po dia tsy mila mitady ela biby goavam-be, tonga avy tany am-pasana, satria izy ireo na aiza na aiza ianao mandeha eny an-dalambe manodidina ny tanàna. Miadia ny zombies dia mety ho:
mba hamonjy izao tontolo izao avy ny fananiham-bohitra ny biby goavam-be milalao lalao Zombie
Ao amin'ny endrika tsotra, fitifirana biby goavam-be teo amin'ny efijery dia tsy hita maso olo-malaza ny maherifo sy ny fitaovam-piadiana sy ny fahitana teboka. Avy lavitra, manomboka hanatona ny maty, ary mila haingana nataony izany satria tsy afaka akaiky koa, satria dia ny zombies dia hamely anao sy ny hampihenana ny tahiry ny fahasalamana. Matetika ao amin'ny Mazava ho azy fa ny lalao afaka tsy hitifitra, fa nifindra ny toetra amam-panahy ao amin'ny virtoaly toerana. Mety ho voafetra ny isan'ny toerana izay lafiny rehetra avy ny vaovao rehetra onjam-zombies. Ny hany vintana ho afa-tsy ny maherifo - dia ny hitifitra biby goavam-be, niezaka ny tsy hamela azy ireo ho akaiky azy loatra. Matetika ny ady amin'ny zombies mandalo mihoatra ny faritra lehibe toy ny tanàna. Ny endrika sy lalao mety hidina an-dalambe, mba hiditra ao amin'ny faritry. Eny tontolo eny izy niarahaba ny maty, ary izy no efa vonona ho amin'ny farany bala mba hitifitra azy. Zombie lalao matetika mametra ny habetsaky ny bala, fa izy ireo dia afaka mameno ny amin'ny asa tanana manokana, ary koa ny fikarohana mba hahitana faritra fitaovam-piadiana mahery vaika kokoa. Indraindray fa ny fandresena tamin'ny fandringanana ny zombies dia nahazo traikefa hevitra azo lany amin'ny fanatsarana ny toetoetry ny mahery fo. Misy lalao izay dia ilaina ny handrava ny zombies amin'ny toeram-pitrandrahana. Ao amin'ny ambaratonga tsirairay, ny maty niafina tany amin'ny fiarovana rafitra, fa ianao manana voafetra ny baomba, izay mety ho ampy mba tsy handrava ny trano, fa teo koa ny biby miboroaka ny potipoti-javatra.
Ny zombies afaka mitifitra avy ny tafondro - maty, dia hita teny lavidavitra, ary tokony mba hamantarana ny jorony sy ny herin 'ny nitifitra ny voam tsara halatsaka aminy. Ny sasany Zombie lalao mamela voalamina vondrona miady ny Zombie fandrahonana. Ohatra, dia afaka mitarika vondrona sisa velona izay nasianao fefy ny tenany amin'ny trano maro, ary Miezaka ny hamelombelona ny olona fandrosoana. Andramo ireo sy ny maro hafa mini-lalao amin'ny zombies ao amin'ity fizarana ity ny toerana!